Cobalt Air dia misafidy Saber ho an'ny teknolojia famandrihana mpandeha
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Cobalt Air dia misafidy Saber ho an'ny teknolojia famandrihana mpandeha
Ny fampidirana ny rafitra vaovao dia ampahany amin'ny vina faratampon'ny zotram-piaramanidina hahazoana fitomboana maharitra, tombom-barotra ary serivisy ambony kalitao ho an'ireo mpandeha ao aminy.
Ny orinasam-pitaterana an-tsambo haingam-pandeha any Sipra, Cobalt Air, dia nahavita nampihatra fampiharana IT lehibe tamin'ny rafitry ny famandrihan-toerana mpandeha an'i Sabre. Ny teknolojia dia napetraka hanampy amin'ny fitomboan'ny fidiram-bola fanampiny ho an'ilay zotram-piaramanidina ary hanolotra traikefa vaovao ho an'ireo mpandeha.
Ny fampidirana ny rafitra vaovao dia ampahany amin'ny vina faratampon'ny zotram-piaramanidina hahazoana fitomboana maharitra, tombom-barotra ary serivisy ambony kalitao ho an'ireo mpandeha ao aminy. Mikasa ny hahatratra ireo tanjona ireo ny zotram-piaramanidina amin'ny alàlan'ny fampiharana teknolojia manavao sy manatsara ny fahaiza-manao - ary ankehitriny ny famandrihan'i Cobalt rehetra, ary ny fiasan'ny seranam-piaramanidina mitsikera dia nafindra ho any Saber.
"Sipra dia firenena mampientanentana amin'ny fiaramanidina, miaina fitomboana 15 isan-taona isan-taona amin'ny fitakiana dia, ary eo anelanelan'ny kontinanta telo no misy azy," hoy i Andrew Madar, tale jeneralin'ny Cobalt Air. “Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny haitao Sabre hitantanana ny famandrihan-toerana afovoany, Cobalt dia manana toerana tsara hivoahana amin'ity fitomboana ity ary hanome vokatra sy serivisy maro karazana hamaly ny fangatahana mitombo. Izahay dia zotram-piaramanidina tanora sy be zotom-po izay manana fitaovana hifaninana amin'ireo mpitatitra lehibe indrindra any Eropa sy Moyen Orient, izay antenainay hampiakarana ny anjarantsika ary hitondra any amin'ny ho avy mahafinaritra. ”
Ny drafitra fanitarana mahomby an'i Cobalt dia andrasana hahita azy io ho lasa kaompaniam-pitaterana lehibe indrindra amin'ny firenena amin'ny fahavaratry ny taona 2018. Niorina tamin'ny 2015 fotsiny, dia efa sidina 20 ny sidina manerana ny firenena 12 any Eropa sy Moyen Orient. Ny rafitry ny haitao vaovao dia antenaina hiteraka fidiram-bola fanampiny amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fivarotana saran-dàlana sy serivisy fanampiana vaovao, ary amin'ny fanintonana ireo mpanjifa vaovao amin'ny alàlan'ny traikefa ambony momba ny sidina.
"Cobalt dia zotram-piaramanidina mitombo haingana any amin'ny firenena izay mandray olona manodidina ny 4.5 tapitrisa isan-taona," hoy i Dino Gelmetti, filoha lefitra EMEA, Airline Solutions, Saber. “Mila rafitra IT matanjaka sy manan-tsaina ary mifantoka amin'ny mpanjifa izao izay afaka mitondra azy amin'ny dingana fitomboany manaraka. Ny teknolojian'ny Sabre dia hanampy ny zotram-pifandraisana hihaona amin'ny andry tsirairay amin'ny fahitany - fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa, fanamorana ny fitomboana, fampitomboana ny tombom-barotra, fanatsarana ny fiarovana ary ny fanavaozana ny lohan'ny fitarika. Ny zotram-piaramanidina mampiasa ny teknolojia famandrihan-toerana ataon'ireo mpandeha dia afaka manantena hahita fitomboan'ny tombom-barotra, izay ahafahan'izy ireo mampiasa vola amin'ny fitomboany ary mifaninana amin'ireo mpifaninana manerantany.
Maherin'ny 225 ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka mampiasa ny teknolojia Sabre hampihena ny vidin'ny asa, hampitomboana ny tombom-barotra ary hanovana ny fomba anompoan'izy ireo mpandeha - ao anatin'izany ny maro amin'ireo mpitatitra lehibe indrindra manerantany.
UNWTO: Africa Africa sy ny biodiversité mifantoka amin'ny INVESTOUR andiany faha-9
New York's Hotel Pennsylvania vonona handray ireo vahiny VIP (Pooch Tena Manan-danja) ho an'ny Westminster Dog Show 2018